नेपाल आज | भगवान बुद्धको मृत्यु सुँगुरको मासु खाएर होइन च्याउ खाएका कारण भएको थियो (भिडियोसहित)
भगवान बुद्धको मृत्यु सुँगुरको मासु खाएर होइन च्याउ खाएका कारण भएको थियो (भिडियोसहित)
आइतबार, ०७ जेठ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
‘शारदा पौडेल’ बौद्ध धर्ममा नेपाली विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक पौडेलको दृष्टिमा भगवान बुद्धको रुप आम मानिसले बुझे भन्दा फरक छ । भगवान बुद्धलाई सर्वज्ञानी मात्रै भन्ने कि घरपरिवारलाई दुःख दिने कपटी पनि ? बुद्धको नाम के थियो ? उनको जन्मको वास्तविकता के थियो ? यस्ता अनेकन विषयहरु छन् जो धेरै प्रकाशमा आएका छैनन् । यस्ता तथ्यसँगको साक्षात्कार प्रा.डा. शारदा पौडेलमार्फत गर्ने प्रयास गरिएको छ । उहाँले भगवान बुद्धबारे व्यक्त गर्नुभएका तथ्यहरु यस्ता छन्ः
जन्म बारे विवाद
बुद्धको जन्मलाई लिएर अहिले पनि विवाद छ । कसैले उनी ५६३ बिसीमा जन्मिएको भन्छन् भने नेपालको हिसाबले बुद्धको जन्म ६२३ बिसीमा भएको हो । वैशाख पूर्णिमाको दिन जन्मिएका उनको त्यस दिनसँग जीवनका तीनवटा घटना जोडिएका छन् । उनको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण पनि वैशाख पूर्णिमकै दिन भएको थियो ।
उनको जन्म लुम्बिनीको एक उद्यानमा भएको थियो । संस्कार र परम्पराअनुसार पहिलो सन्तानको उसको मावलमा हुनु पर्छ भन्ने थियो । जसअनुसार मायादेवी ‘देवदह’ अर्थात माइती जाने क्रममा लुम्बिनीमा बसेकी थिइन् । लुम्बिनीकै पुस्तरणीय भन्ने पोखरी नजिकै उनले बुद्धलाई जन्म दिइन् ।
शिद्धार्थ नाम नै छैन
चुनावी प्रक्रियाअुनसार बुद्धका बाबु शुद्धोधन गणराज्यका राजा भएका थिए । उनका सुपुत्रका रुपमा सर्वार्थ शुद्ध (गौतम बुद्ध्) को जन्म भएको थियो । बौद्ध शास्त्रिय ग्रन्थहरुमा हेर्दा बुद्धको नाम शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, भन्ने भेटिन्छ । तर शिद्धार्थ भन्ने कतै छैन । कुनै ग्रन्थहरुमा शिद्धार्थ छैन, यद्यपि यो नाम चर्चित भएको छ । यसको एक कारण हिटलरका सल्लाहकार हर्मन हेजको ‘शिद्धार्थ’ भन्ने विश्वचर्चित उपन्यास पनि हो कि भन्ने आधारहरु छन् ।
जन्म पछिका अनौठा घटना
सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । तर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । बौद्ध गन्थहरुमा उल्लेख भएअनुसार बुद्ध गर्भमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि नै मायादेवीले सपनामा सेतो हात्ती देखेकी थिइन् । बौद्ध ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएअनुशार बुद्धले मायादेवीको कोखबाट शुद्ध तरिकाले जन्म लिएका हुन् र जन्म पछि सात पाइला हिँडेका हुन् । उनको जन्म पछि वैभवहरुको आगमन भएको भनाइ छ । जन्मँदा उनलाई आशिर्वाद दिन ब्रम्हा, इन्द्रसममेत आएको विश्वास गरिन्छ ।
जन्म पछि बुद्धले ‘आफू सर्वज्ञानी हुँ र आफ्नो यो अन्तिम जन्म हो’ भनेको बौद्ध ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ । उनको जन्म भएको सात दिनमा मायादेवीको मृत्यु भएको थियो ।
राजा शुद्धोदन र रानी मायादेवीको विवाह भएको २० वर्षसम्म कुनै सन्तान जन्मेका थिएनन् । सन्तान जन्मने आशामा शुद्धोदनले आफ्नै साली महाप्रजावतीसँग पनि विवाह गर्छन् । बुद्ध जन्मेको केही दिनमा महाप्रजावतीबाट पनि नन्द नामक पुत्रको जन्म हुन्छ । तर महाप्रजावतीले नन्दको स्याहारको जिम्मा धाइआमालाई दिन्छिन् र आफूले बुद्ध स्याहार्छिन् ।
बुद्धको जन्मपछि उनी स्वामी हुन्छन् की बुद्ध हुन्छन् या सम्राट हुन्छन् भनेर दुइवटा भविष्यवाणी गरिएका थिए । बुद्धमा बैराग उत्पन्न नहोस भनेर शुद्धोदनले संसारिक बनाउन सुखभोगको प्रबन्ध गर्न थाल्छन् । तर बुद्धमा बाल्यकालदेखि नै वैराग्यता र चिन्तन थियो भन्ने आधारहरु छन् । बुद्धचरित आदि ग्रन्थहरुमा बुद्ध बाल्यकालदेखि नै रोगी, बृद्ध, शव र योगी बारे गहिरो चासो राख्ने भन्ने उल्लेख छ ।
त्यही कुराहरुले उनलाई घर छोड्न बाध्य बनाएको थियो । बुद्धको पूर्वजन्मका कथा पढ्दा उनी बोधीसत्व भए पनि उनले विवाह नै गरेको देखिन्छ । यसबाट साधना गर्न विवाहले रोक्दैन भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुन्छ । त्रिपिटक ग्रन्थमा बुद्धकी पत्नी पनि साधिका थिइन भन्ने उल्लेख छ ।
भिक्षुले विवाह गर्नु हुँदैन
योगीले आफ्नो ब्रम्हचर्या धारण गर्न सकेन भने त्यहाँबाट च्युत हुन्छ र विवाह गर्छ । योगी नै भइराख्न भिक्षुले विवाह गर्नुहुँदैन । बुद्धले विवाह गरे, एक पुत्रको जन्म पनि भयो । त्यसपछि उनले गृह त्याग गरेर ब्रम्हचर्यको अभ्यास गरे । ६ वर्षको कठिन तपस्याबाट उनले बुद्धत्व प्राप्त गरेको देखिन्छ । उनले विवाह गरे, त्यसपछि त्याग गरे । फेरि विवाह गरेनन् । भिक्षु हुनुभन्दा अघि नै विवाह गरिएको छ भने त्यसलाई बुद्ध धर्म दर्शनअनुसार गलत मानिदैन ।
भगवान बुद्ध पीडक कि महाज्ञानी ?
यशोधरा सामान्य महिला थिइनन् । उनी पनि साधना गर्दै आएकी साधिका थिइन् । उनी राजपरिवारकी छोरी÷ बुहारी थिइन् । उनको बुद्धसँग १६ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो र बुद्धले उनलाई २९ वर्षको उमेरमा राहुल जन्मिएपछि छोडेका थिए । यशोधरालाई छाड्दा यसअर्थमा अन्याय देखिदैन किन भने उनी सामान्य परिवारकी छोरी थिइनन् । आफ्नो पतिले सबैको लोककल्याणका लागि काम गर्छन् भने एक जनाले त्याग गर्दा फरक पर्दैन । यशोधराको त्यागलाई मानवकल्याणका लागि ठीक मान्न सकिन्छ । त्यसमाथि यशोधरा आफैले पनि वैराग्य प्राप्त गरिसकेकी थिइन् ।
बुद्धको ज्ञान प्राप्ति
शरिरमा हाड र छालामात्रै हुने गरी जब उनले ध्यान गरे तब पनि उनको उद्देश्य पूरा भएन । त्यसबखत चिन्तन मनन गर्ने क्रममा उनले सानो हुँदा आफ्नै राज्यमा रुखमुनी बसेर गर्दाको ध्यानमा शान्ति पाएको सम्झिन्छन् । यसरी केही नखाएर शरीर सुकाए निर्वाणको प्राप्त हुँदैन भन्ने निर्णयमा उनी पुग्छन् । उनले सामान्य भोजन गरेर साधना गर्न सकिन्छ भनेर भिक्षुलाई सुनाउँछन् । बुद्धको यस्तो कुरा सुनेर पञ्चवर्गीय (पाँच जना भिक्षुहरु) ले बुद्धलाई छाडेर हिँडछन् । ती भिक्षुहरुलाई बुद्ध योगीपथबाट च्यूत भएको लाग्छ ।
बुद्धत्व कसरी प्राप्त ?
त्यो बेला बुद्धले शरिर सुकाएर मात्रै ज्ञान प्राप्त नहुने बुझिसकेका हुन्छन् । पञ्चवर्गीय भिक्षुहरुले पनि छाडेर हिँडिसकेपछि एक दिन उनी अनुमा नदीको किनारमा भएको एक ठूलो वृक्षमुनी ध्यान गर्न थाल्छन् । त्यो वृक्षलाई स्थानीय जनताहरुले वनदेवताको निवासस्थल भनेर पुजा गर्ने गर्थे । जहाँ सुजता नामकी कन्याले पहिले नै भाकल राखेकी हुन्छिन् । सुजताले आफ्नो विवाह भएर पुत्रकै जन्म भएमा वनदेवतालाई खीर चढाउने भाकल गरेकी थिइन । उनको त्यो भाकल पूरा हुन्छ । खीर चढाउनु अघि वनदेवताको निवासस्थल सफा गर्न, लिपपोत गर्न पूर्णा नामकी दासीलाई पठाउँछिन् । पूर्णाले त्यो वृक्षमुनी बुद्ध ध्यानमा लिन भएको देखेर साच्चै वनदेवता प्रकट भएको भनेर खबर सुजता कहाँ पुर्याउँछिन् ।
बुद्धको मुहारमा देखिने तेज र आभाबाट सुजता अत्यन्त प्रभावित हुन्छिन् । उनले वनदेवता ठानेर बुद्धलाई खीर दिन्छन् । तर बुद्धले आफू एक साधक मात्रै भएको बताउँछन् । सुजताले खीर खाइदिन धेरै आग्रह गरेपछि बुद्धले त्यो खीर खान्छन् । त्यो दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो । खीर खाएकै दिन बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्छन् । उता सुजताले पूर्णालाई दासताबाट मुक्त गरेर छोरी बनाउँछिन् ।
ज्ञान प्राप्तपछि बुद्धले त्यसलाई पटक पटक परीक्षण गर्छन् । पटक पटक ध्यान गरेर त्यो ज्ञानको सत्यता जाँच गर्छन् । हरेकपटक एकै नतिजा आउँछ । त्यसपछि ज्ञान प्रचार गर्ने कि पनर्वाणमा जाने भन्ने दोधार हुन्छ । त्यही बेला ब्रम्हदेवले भगवान बुद्धलाई ज्ञानको प्रचार गर्न तीन पटक आग्रह गर्छन् । आफूले पाएको ज्ञान सुरुमा आफ्ना गुरुहरु उद्धक रामपुत्र र आडारकलामलाई सुनाउन चाहन्छन् । तर उनीहरुको निधन भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि उनी पञ्चवर्गीय भिक्षुहरुर्ला सुनाउन सारनाथ जान्छन् ।
भगवान बुद्धको मृत्यु ८० वर्षको उमेरमा भएको थियो । आफ्नो मृत्यु हुँदै छ भनेर उनलाई थाहा भइसकेको थियो । त्यतिबेला उनी कुशीनगरमा थिए । उनले सुंगुरको मासु खाएर अपच भएर मृत्यु भएको भन्ने विवाद छ । च्याउको एक प्रजाती सुकर मद्धभ पनि हुन्छ । त्यही च्याउ खाएर भगवान बुद्धको निधन भएको थियो । सुकर मद्धभलाई सुँगुर भनेर अथ्र्याएको पनि पाइन्छ । तर वास्तविकता सुँगुर नभएर च्याउ थियो ।
महापुरुषको जन्म साधारण हुँदैन । बुद्ध पनि महापुरुष थिए । उनको जन्मको विषयलाई कसैले पनि अविश्वास गरेको देखिँदैन । गर्न पनि हुँदैन किनभने उनका जति पनि उपदेश छन् ती सत्य हुन् भने जन्मका कुराहरु कसरी अविश्वास हुन सक्छन् र ?
(प्रा. डा. शारदा पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
dr. sarada poudel gautam buddha story